POOL VIEW #3 IGUMBI LWESIvakashi Playa Los Cocos
Leli gumbi lokulala lisezingeni lesibili lale ndlu yokulala eyi-5. Itholakala ku-Pacific Ocean enhle, ikhaya lethu linechibi lokubhukuda elingamamitha angama-25, indawo yokudlela yangaphandle kanye nokushona kwelanga okumangalisayo. Indawo yethu iyindawo egxile kubantu abadala. Leli gumbi lingakwazi ukuhlalisa izithandani ezingafika kwabangu-2. Intengo esohlwini isekelwe kuzihambeli ezingu-2. Izivakashi ezengeziwe zingaphansi kwenkokhiso eyengeziwe.
Sikumizuzu emi-2 ukuya e-Atikama. I-San Blas iyimizuzu engama-22 yokushayela. Ngesikhathi sasehlobo ukufinyelela ogwini kulinganiselwe ngenxa yamagagasi aphezulu. I
Igumbi lokulala lezivakashi lisezingeni eliphezulu futhi linemibhede emi-2, amafasitela amakhulu aseceleni kwechibi, isiphephetha-moya sikasilingi, isiqandisi esincane/ifriji, imicrowave encane nesikhithi samanzi. Indlu yokugezela ye-en-suite (enamathiselwe) ineshawa efakwe amathayela, usinki kanye nendlu yangasese. Igumbi lokulala linesikhala sekhabethe, futhi, kukhona i-TV yesikrini esiyisicaba. Wonke amakamelo anamathawula namalineni futhi igumbi ngalinye libheke endaweni yokubhukuda.
Ikamelo ngalinye linenani ngalinye (ubusuku obuncane obungu-2) ngokusekelwe ezivakashini ezingu-2 noma ngaphansi. Kufanele usazise ngesikhathi sokubhuka uma ningaphezu kwezihambeli ezingu-2. Izivakashi ezengeziwe ngu-$400 pesos isivakashi ngasinye ubusuku ngabunye futhi uzongena lapho. Singakwazi ukuhlalisa izivakashi ezingafika kwezi-14 kule ndawo.
I-Atikama iwumphakathi omncane odobayo ohlinzeka ngezindawo zokudlela ezincane ezibheke olwandle ezihlinzeka ngezinhlanzi ezintsha. Ibhishi lase-Atikama laziwa ngokuthi i-Playa Matanchen futhi lingelinye lamabhishi abanzi kakhulu futhi anosanti kunawo wonke e-Mexico. I-Atikama inikeza ama-rock oyster, izimfanzi kanye ne-rock lobster, kanye ne-mahi mahi ne- robalo. Eduze kunenye idolobhana labadobi elibizwa ngokuthi iSan Blas elinabantu ababalelwa ku-12000. Itholakala ku-62 KM enyakatho-ntshonalanga yeTepic, inhloko-dolobha yesifunda saseNayarit. I-San Blas inikela ngezinto ezehlukene okumele zenziwe njengokubukela imikhomo, ukubuka izinyoni, ukuntweza emanzini kanye nokudoba kwezemidlalo.
Ulwandle e-El Limoncito, okuwuhambo olufushane lwemizuzu engu-15+ lungenye yezindawo ezinokuthula ezinhle kakhulu nezingakaze zithintwe ongazithola. IPlatanitos icishe ibe yimizuzu engama-22 eningizimu futhi inolwandle oluhle olunokukhethwa kwezindawo zokudlela.
Leli khaya liklanyelwe ukunikeza zonke izihambeli indawo yazo kanye nokubanikeza okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele. Ababungazi bakho bakhona uma udinga isiqondiso noma iseluleko mayelana nekhaya nendawo ezungezile.